Scops Owl - Izinyoni - Iningizimu Afrika
Lolu hlobo lwesikhova lwaziwa nge-White-faced owls (izikhova ezimhlophe ebusweni). Ngenxa yokwehlukahlukala kwalezi zikhova, zize zibalwe emndenini wazo zodwa obizwa nge-Genus-Ptilopsis. Lesi sikhova sijwayelekile i-Afrika yonke ikakhulukazi eningizimu yeSahara.
Lezi yizikhova ezincane ezonombala ompunga nobuso obumhloshana okukakwe yindilinga emnyama. Zinezimpaphe ezivokomele ngasemadlebeni namehlo a-olintshi ngombala.
Zinezindlebe ezinkulu ukwedlula zonke izikhova. Ubude bazo ngamasentimitha ayi 19-24. Zinamagwagwa ezindlebe amade nobuso obuzungezwe okumnyama.
Njengazo zonke izikhova ezincane, zidla izinambuzane. Kwesinye isikhathi ziyazidla nezinyoni ezincane, amagundane nezinye izilwane ezincane ezincelisayo. Zibulala izilwane ezinkulu kunamanye ama-Scops Owl. Zizengela ngokundizela phezulu ezindaweni ezivulekile, zehle uma zibona ukudla.
Izikhathi zazo zokuzalela ziyehluka ezindaweni ezehlukene. EZimbabwe zizalela ngoNcwaba kuya kuLwezi, kuthi eningizimu zizalele ngoNtulikazi kuya kuNhlolanja. Zibekela amaqanda ezidlekeni ezishiywe ngezinye izinjoni njengamajuba nezinkozi. Zivame ukuzalela amaqanda amabili kuya kwamane kanti amhlophe ngokucwebezelayo. Iqanda ngalinye lithi libekwa libe liqala lifukanyela kuze kuphele izinsuku ezingama-30. Emuva kwamasonto amane amachwane ayaqala ukuhambahamba emagantsheni, bese eqala ukundiza ezinsukwini ezimbalwa emuva kwalokho.
I-White Faced Scops Owl ibonakala kakhulu ebusuku futhi idla izinambuzane. Ithanda izindawo ezinezikhotha namahlathi futhi zinokusebenzisa izidleke eziphansi ukuzalela amaqanda. Izikhova ezincane ezidla izinambuzane (Genus Otus) zehlukaniswa ngezinhlobo ezimbili; ama-Screech Owl nama-Scops. Zilinganiselwa emashumini amane izinhlobo ze-Otus emhlabeni wonke jikelele. Ama-Otus amaning athanda izindawo ezifudumele. Uma i-Otus iphazamiseka uma ilele emini, iyakwazi ukwenza umzimba ube mude ebese ilala ngohlangothi ifane negantsha lesihlahla.
Zitholakala ezindaweni ezinamahlathi nemithi emhlabathi ongenabo utshani obuningi. Zivamile nasenzindaweni ezinamathafa nezihlahla ezinfushane.